အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းဆုရရှိသွားသည့် ပဲခူတိုင်းမှအဖွဲ့ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
College (140) Education Offices (1159) Overseas Education (92) School (2875) Supportive Shop (3620) Training Centre (3720) University (58) School Data
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းဆုရရှိသွားသည့် ပဲခူတိုင်းမှအဖွဲ့
ထိုစိန်ခေါ်မှုသည် လာမဲ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသန်းပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေတည်ဆောက်ပြီး အသွင်ပြောင်းစွမ်းအင်တီထွင်အသုံးချရန်
အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား ကျောင်းသူပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆုက ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပေးအပ်တာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရတဲ့ project ကို USD 1 million ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
Project စတင်ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာ UN အဖွဲ့ချုပ်မှ ဇကာတင် ၆ ဖွဲ့ ရွေးချယ်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ထို project ၆ ခုထဲကနေမှ ထပ်မံရွေးချယ်ခံရသည့် project တွေကတော့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုသည့် ATMs စက် ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုပြီး seaweeds တွင်ရှိသောပိုးမွှားများကို ရှင်းလင်းနိုင်သော
စက်နှင့် နေရောင်ခြည်အသုံးပြုစရာမလိုပဲ ဆန်အရည်အသွေးမပျက်စီးစေသည့် စပါးအခြောက်ခံစက်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အကဲဖြတ်သည့်အဖွဲ့များမှ ရွေးချယ်ပြီးသည့်အခါမှာတော့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Bill Clinton မှ အနိုင်ရသည့်အဖွဲ့(Rice Inc-Myanmar Team) ကို ကြေညာပေးခဲ့ပါသည်။
ဆုလက်ခံရယူရန် စင်မြင့်ပေါ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ လူငယ်လေးယောက်ဟာ တီရှပ်အဖြူ၊ လုံခြည်အစိမ်းရောင်များဖြင့် ဆုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
Rice Inc. Accepting the Hult Prize from former President Bill Clinton (Image Credit: Rice Inc. Facebook Page)
Rice Inc အဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲ??? သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ???
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်နေခဲ့တဲ့ Rice Inc ကို SunRice လို့လူသိများခဲ့ပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုတေသနတက္ကသိုလ်(IRRI) နှင့် ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ်အနီးတွင်တည်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်တို့မှ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် ၇ ယောက်ရှိပြီး အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးမှာ မလေးရှား၊ လာအို၊ ဟောင်ကောင်နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံတွေဟာလဲ ဇီဝဆေးပညာ၊ ဥပဒေ၊ သိပ္ပံ၊ စီးပွားရေးနှင့် စိတ်ပညာ စသဖြင့် မတူကွဲပြားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေက လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
All Team Members of Rice Inc. (Image Credit: Rice Inc. Facebook Page)
Rice Inc အဖွဲ့မှ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲ???
အဓိကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လယ်သမားတွေ စပါးရိတ်ပြီးကာလမှာ စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုစိန်ခ်ါမှုမျိုးလဲဆိုတာကို Rice Inc မှ Lincoln ဆိုသူက ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လယ်သမားတွေဟာ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးပြီးချင်းမှာ သူတို့စပါးတွေစိုနေသောကြောင့် ရောင်းချလို့မရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး စပါးတွေကို အခြောက်ခံတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုတည်း
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမျိူးတွေမှာ စပါးအခြောက်ခံဖို့ဆိုတာ လယ်သမားတွေအတွက် အရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
စပါးတွေဟာ စိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဈေးကောင်းမရကြပါဘူး။
တနည်းအားဖြင့် သမားရိုးကျစပါးအခြောက်ခံတဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဟာ စပါးများကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေသာမက၊ အရည်အသွေးနိမ်ကျ့မှုတွေပါ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် သူတို့ဟာ ဈေးနှိမ်ခံရမှုတွေရှိလာပါတယ်။
စပါးတွေကို အကြာကြီးသိုလှောင်ပြီး အခြောက်ခံထားနိုင်မယ်ဆိုရင် လယ်သမားတွေဟာ ဈေးကောင်းရမယ်ဆိုတာ သိသော်လည်း သူတို့မှာအချိန်အများကြီး သိုလှောင်ထားဖို့ မတတ်နိုင်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လယ်သမားအများစုဟာ စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရာသီအစမှာပဲ သူတို့တွေက ချေးငွေတွေယူခဲ့ရသောကြောင့် အကြွေးသံသရာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
စပါးရိတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ စပါးများကို ရောင်းချပြီး အကြွေးများကို ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဟာ အကြာကြီး မသိုလှောင်ထားနိုင်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် သူတို့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ဆန်စပါးတွေကို ချက်ချင်းရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ဖိအားများရှိနေပြီးတော့ အခြောက်ခံခြင်း (သို့) သိုလှောင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း နှင့် စပါးရိတ်သိမ်းကာလတွင် ဖြစ်တတ်သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများကြောင့် သာမာန်နှစ်များနှင့်မတူပဲ စပါးအခြောက်ခံရန်အတွက် အခက်အခဲများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
လယ်သမားများရဲ့အခက်အခဲများကို စပါးအခြောက်ခံဖို့နှင့် သိုလှောင်ဖို့အတွက် လယ်သမားတွေရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို လျော့ချနိုင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ၀င်ငွေတွေကို တိုးလာအောင်Rice Inc က စံချိန်မီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
Rice Inc အဖွဲ့က နည်းပညာအသိအမှတ်ပြုရထားပြီး ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆန်အခြောက်ခံစက်တွေကို လယ်သမားတွေအတွက် အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အခြောက်ခံပြီးသားဆန်တွေကို သိုလှောင်ထားပြီး ဆန်ဝယ်လိုအားမြှင့်တက်လာသောအခါ ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်ထဲသို့ တင်ပို့ရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်း အရည်အသွေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာ အရင်ကထက် ဈေးပိုရခဲ့ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့ Rice Inc အနေနဲ့ ဆန်တစ်တောင်း ကို မြန်မာငွေကျပ် ၂၀၀ မှ ၂၅၀ ကျပ်ဖြင့် လယ်သမားများအား စပါးအခြောက်ခံစက်များကို ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အခြောက်ခံစက်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးမှာ 10,000 USD ဖြစ်နေသောကြောင့် လယ်သမားများအနေနဲ့ စက်ကိုအကြွေးနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ဖို့ကလည်း ၀င်ငွေမကောင်းတဲ့အပေါ်မှာ အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
လယ်သမားတွေအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုကတော့ အသေးစားချေးငွေယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့အခြေအနေက ဆန်ပမာဏအများကြီး ၀ယ်ယူစုဆောင်းဖို့ကုမ္ပဏီအတွက် အရင်းအနှီးများတဲ့အပေါ်မှာ လယ်သမားတွေအတွက် ချေးငွေကာလတိုးချဲ့ပေးဖို့အတွက် Micro financing Institutions နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဖို့ Rice Inc အဖွဲ့က စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
From Left to Right: Su Su (IRRI), Rachel (Rice Inc.), Phyo (ProspectsASEAN), Lincoln (Rice Inc.)
Rice Inc အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးစပါးအခြောက်ခံစက်ကို တီထွင်ပြီးတော့ Global Accelerator program ရဲ့ Grand Finals နေ့မှာ စတင်လည်ပတ်ပြခဲ့တဲ့ခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး customer မဟုတ်တဲ့အတွက် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဆန်ရဲ့အဓိကစီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးဟာဆိုရင် ရေဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့ပြောကြား ရေပေါ်မှီခိုမှုရှိတယ်လို့ ဖောက်သည်တစ်ဦးကဆိုသည်။
Rice Inc အဖွဲ့မှ Rachel က” ဆန်စပါးတွေ စိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ရောင်းတဲ့အခါမှာ အလွန်နည်းတဲ့ ဈေးကိုရကြိမ့်လိမ့်မယ်။သို့သော် သူမက ငါတို့ရဲ့စပါးအခြောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုဟာဆိုရင် ပထမဆုံးဆန်စပါးတွေ ခြောက်မယ်။ ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်ရမယ်။ တကယ်အသီးအနှံထွက်လာတဲ့ခါမှာ များပြားလှတဲ့ဝင်ငွေတွေရရှိလာမယ် “လို့ပြောပြထားပါတယ်။
Rice Inc ကို မြန်မာဆန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ထိုရင်ဆိုင်မှုကိုဖြေရှင်းရန် ပြည်ပမှာ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
အချို့လူများက သူတို့ကိုယ်တိုင် စပါးအခြောက်ခံစက်များတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ အနည်းငယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေတော့ ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသိအမှတ်မပြုသည့် အခြောက်ခံစက်များသည် အကျိုးရလဒ်ထက် ပျက်စီးမှုသာ ပိုများသောကြောင့် နေရောင်ဖြင့် အခြောက်ခံသည့် စက်သည် တစ်ခုတည်းသော ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါသည်။
The Hult Prize Journey ၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကဘာလဲ???
The Hult community ကကောင်းကောင်းအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်လို့ Lincoln ကပြောတယ်။ သူတို့အားလုံးကိုမေးတယ် အကြံဥာဏ်တွေရှိလား၊ လေ့လာသင်ယူမှု တွေလို့လား???
လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ သူလဲအခက်အခဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ကောင်းကောင်းကြပ်မတ်ပေးတယ် ။လုပ်ဆောင်မှုတခုလုံးကို စောင့်ကြပ်ပေးပြီး ကူညီမှုတွေပေးခဲ့ကြောင်း ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။
ထို့ပြင် Rio de Janeiro ရဲ့ ၂၀၁၈ TFF စိန်ခေါ်မှုရဲ့ နောက်ဆုံးဇကာတင်စာရင်းမှာ ၀င်ခဲ့ပြီးတော့ Borlaug Prize 2,500 USD ကိုဆုကြေးငွေအဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်။
Rice Inc. Members at TFF (Image Credit: Rice Inc. Facebook Page)
ထိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မှတ်ပုံတင်ရန် စီစဉ်နေခဲ့သည်။
အဓိကအဖွဲ့ဝင်များဟာ June 2019 မှာ Graduation ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကို ခွဲဝေရန်အတွက် အချက်အလက်များဖြည့်စွက် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လာမဲ့အပတ်မှာ သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနာဂတ်ဒေသများချဲ့ထွင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ IRRI နှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့အတူဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်သွားလိမ့်မည်။
News Read 1364 times